mithokhabar, Author at Mitho Khabar
November 13, 2020 mithokhabarLeaveaComment on सुशान्तसँग फिल्म खेलेका बलिउड अभिनेता आसिफले गरे देहत्याग
बलिउड अभिनेता आसिफ बसरा मृत भेटिएका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार ५३ वर्षीय बसरा हिमाञ्चल प्रदेशको धर्मशालास्थित एक निजी कम्प्लेक्समा बिहीबार मृत भेटिएका हुन्। स्थानीय प्रहरीले उनले देहत्याग गरेको हुन सक्ने आशंकामा अनुसन्धान सुरू गरिएको बताएको छ। समाचारमा उल्लेख गरिएअनुसार बसरा धर्मशालामा एउटा घर भाडामा लिएर पाँच वर्षदेखि बसिरहेका थिए जुन घरमा एक विदेशी महिलासँग लिभ […]
November 3, 2020 mithokhabarLeaveaComment on स्त’न माड्दा महिलालाई के–के हुन्छ ?
काठमाडौं । महिलाहरुले आफुलाई फिट राख्नको लागि अनेक मेहनत गर्छन । महिलाहरु आफू सुन्दर हुनका लागि ब्युटिपार्लर जान्छन् । फेसियल, स्क्रब र विभिन्न खाले अनेक उपाय अपनाउँछन् । आफ्नो स्वास्थ्यको लागी महिलाहरु जिम जाने, योगा गर्ने र स्वस्थ खाना खान्छन् । तर, आफ्नो स्त’नलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्नेमा अनभिज्ञ नै छन् र खासै केहि पनि […]
November 3, 2020 mithokhabarLeaveaComment on यस्तो गाउँ जहाँ विवाहपछि बेहुलाको साथीसँग बेहुलीले यस्तोसम्म गर्नुपर्छ…..[हेर्नुहोस भिडियो]
काठमाडौं । नेपालमो उत्तरी छिमेकी देश चीनमा अनौठो परम्पराहरु रहेका छन् । चीनका मानिसहरुको बारेमा भनिन्छ, उनीहरु रोमान्टिक विचारको मामलामा अलिकति रुढिवादी नै हुन्छन् । तर विहेपछि खेलिने खेल (वेडिङ,गेमको)को सन्दर्भमा उनीहरु खुला विचारका हुन्छन् । यस्तोमा एक वेडि ङ गेमको भिडियो सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल बनेको छ । जसमा बेहुलाका साथीहरु उनकै अगाडी उनकी श्रीमतीका […]
November 3, 2020 mithokhabarLeaveaComment on श्रीमतीलाई खुसी बनाउने २५ सुत्रहरू ! हरेक पुरूषले पढ्नुपर्ने !
काठमाडौँ । आजकल नेपाली समाजमा थुप्रै कारणहरुले डिभोर्सको घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । कतै तपाईले आफ्नो श्रीमतीलाई खुसि पर्न नसकेर तपाईको परिवारिक जीवनमा खटपट त परेको छैन ? सामाजिक संजालमा चितपरिचित ले खेक गणेश ज्ञवालीले तयार पारेका श्रीमतीलाई खुसी बनाउने २५ सुत्रहरूयी सुत्रहरु अपनाउनुभयो भने तपाइको परिवारमा कहिले पनि झगडा हुदैन १. काली, परी, […]
November 3, 2020 mithokhabarLeaveaComment on ‘नागिन’ बन्दै श्रद्धा कपुर
बलिउड नायिका श्रद्धा कपुर इच्छादारी नागिन बन्ने तयारीमा छिन् । सामाजिक संजालबाट चलचित्र बन्न लागेको जानकारी दिदै नायिका कपुरले आफू उत्साहित भएको बताएकी छिन् । श्रद्धाको चलचित्र ‘नागिन’को तीन सिरिज बन्ने भएको छ । श्रद्धाले लेखेकी छिन्–‘चलचित्रको पर्दामा नागिनको भूमिका निर्वाहा गर्न पाउनु मेरो लागि खुशीको कुरा हो । म सधै नै भारतको परम्परासँग जोडिएको […]
November 3, 2020 mithokhabarLeaveaComment on यी युवतीले छोडेपछि पागलसरी बने- शिशिर भण्डारी । फोटो हेर्दै धरधरी रोएको भिडियो भाईरल बन्यो (भिडियो हेर्नुहोस )
प्रेम बियोगमा छटपटिएका शिशिर भण्डारी कसैको यादमा रुन्छन् । उनको फोटो हेरेर पागल सरी बन्छन् । चर्किएको ऐनासरी फुट्यो हाम्रो माया, तिमीले घात गरेपछि छुट्यो हाम्रो माया भन्ने भावमा पागलसरी शहर शहरमा एक्लै डुलिरहेका भेटिन्छन् । यो वास्तवमा नभै अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको गीत फोटो फिरिममाको कथा हो । गीतलाई केहि समयमै ३७ लाख माथिले […]
काठमाडौं । विश्वमा हरेक दिन नयाँ र अनौठा घटनाहरु भइरहेका हुन्छन् । अहिले बाहिर आएको समाचार भारत बिहार राज्यको हो। जगदीशपुर पुलिस क्षेत्र यहाँ छ । यहाँ एक महिला गर्भवती हुने बित्तिकै बबाल भएको छ । महिलाको नन्द यस सम्बन्धमा डीआईजी पुगेकी थिईन् । अब तपाई सोच्दै हुनुहुन्छ, के भयो रु वास्तवमा, गर्भवती महिलाको पाँच […]